Satan Nniso Bedi Nkogu Ɔkwan Biara So
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | January 2010
KENKAN WƆ Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bicol Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kikongo Kirghiz Kirundi Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maya Mizo Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Tetun Dili Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese
“Ɔdebɔneyɛfo de, ɛrensi no yiye koraa.”—ƆSƐNK. 8:13.
1. Dɛn nti na atɛn a wɔrebebu abɔnefo no yɛ awerɛkyekyesɛm?
NEA ɛbɛyɛ biara wobebu abɔnefo atɛn. Wobeyi wɔn ho ano wɔ nea wɔayɛ ho. (Mmeb. 5:22; Ɔsɛnk. 8:12, 13) Eyi yɛ awerɛkyekyesɛm ma nnipa a wɔdɔ trenee a abɔnefo asisi wɔn na wɔayɛ wɔn ayayade no titiriw. Abɔnefo a wobebu wɔn atɛn no mu otitiriw ne Satan Ɔbonsam a ɔno ne abɔnefo agya no.—Yoh. 8:44.
2. Dɛn nti na na ebegye bere na wɔde asiesie asɛm a ɛsɔree wɔ Eden no?
2 Wɔ Eden turom no, Satan a na ahomaso ahyɛ no ma no maa nnipa poo Yehowa nniso. Ɛno nti, yɛn awofo a wodi kan no kɔkaa Satan ho ma wɔsɔre tiaa hokwan a Yehowa wɔ sɛ odi tumi no, na wɔbɛyɛɛ abɔnefo wɔ Yehowa ani so. (Rom. 5:12-14) Nokwarem no, na Yehowa nim nea aniammɔho a wɔyɛe ne atua a wɔtewee no de bɛba wɔn so. Nanso, na ɛsɛ sɛ wɔma abɔde a wonim nyansa nyinaa hu nea na ɛnyɛ dɛn ara a ɛbɛba atuatewfo no so no. Enti, na ebegye bere na wɔde asiesie asɛm a ɛsɔree no, na wɔama obiara ahu sɛ atuatewfo no dii mfomso ankasa.
3. Adwene bɛn na ɛsɛ sɛ yenya wɔ nnipa nniso ho?
3 Esiane sɛ nnipa poo Yehowa nniso nti, ɛho behiae sɛ wɔn ankasa hyehyɛ wɔn nniso ahorow. Bere a ɔsomafo Paulo rekyerɛw ne mfɛfo gyidifo a wɔwɔ Roma no, ɔkaa nnipa nniso a ɛte saa ho asɛm sɛ “atumfoɔ a wɔkorɔn.” Wɔ Paulo bere so no, na atumfoɔ a wɔkorɔn no ne Roma nniso no titiriw, na na Ɔhempɔn Nero a odii ade fi afe 54 kosii afe 68 Y.B. mu no na odi so. Paulo kae sɛ “Onyankopɔn na ɔde” atumfoɔ a wɔkorɔn saa no “asisi wɔn sibea.” (Monkenkan Romafo 13:1, 2.) So ɛno kyerɛ sɛ na Paulo reka sɛ nnipa nniso korɔn sen Onyankopɔn de anaa? Ɛnte saa koraa. Mmom no, nea na ɔrekyerɛ ara ne sɛ bere tenten a Yehowa ama kwan ma nnipa nniso wɔ hɔ no, ɛsɛ sɛ Kristofo kyerɛ obu ma “Onyankopɔn nhyehyɛe,” na wogye atumfoɔ a wɔte saa no tom.
Ɔkwan a Ɛbɛkɔ Akowie Ɔsɛe Mu
4. Kyerɛkyerɛ nea enti a nnipa nniso bedi nkogu ɔkwan biara so no mu.
4 Nanso, nnipa nniso a Satan hyɛ akyi no bedi nkogu ɔkwan biara so. Dɛn ntia? Ade biako ne sɛ, ɛnyɛ Onyankopɔn nyansa na ɛkyerɛ wɔn kwan. Yehowa nkutoo na ne nyansa yɛ pɛ. Enti, ɔno nkutoo na obetumi akyerɛ nniso a ɛyɛ papa. (Yer. 8:9; Rom. 16:27) Yehowa nte sɛ nnipa a wɔtaa sɔ biribi hwɛ na ama wɔahu nea ɛyɛ papa no, ɔno de, bere nyinaa onim ɔkwan a eye sen biara a wɔfa so yɛ biribi. Nniso biara a ɛnyɛ Yehowa na ɔkyerɛ no kwan no bedi nkogu ɔkwan biara so. Eyi nti, mfiase pɛɛ na ɛdaa adi sɛ nnipa nniso a Satan hyɛ akyi no bedi nkogu. Afei nso, esiane sɛ pɛsɛmenkominya na ɛmaa Satan piapiaa nnipa ma wɔtwee wɔn ho fii Yehowa ho nti, nnipa nniso bedi nkogu.
5, 6. Ɛbɛyɛ sɛ dɛn na ɛmaa Satan sɔre tiaa Yehowa?
5 Obi a onim nyansa renyɛ biribi a onim sɛ ɛrenyɛ yiye. Sɛ ɔyɛ n’adwene sɛ ɔbɛkɔ so ayɛ ade a ɔpɛ sɛ ɔyɛ no a, obegye n’animguase. Ada adi wɔ abakɔsɛm mu mpɛn pii sɛ mfaso biara nni so sɛ obi bɛsɔre atia Ɔbɔadeɛ a ɔno ne ade nyinaa so tumfoɔ no. (Monkenkan Mmebusɛm 21:30.) Nanso, Satan a na ahomaso ne ahantan ahyɛ no ma no dan n’akyi kyerɛɛ Yehowa. Enti, Ɔbonsam hyɛɛ da na ɔfaa ɔkwan a na ɛbɛkɔ akowie ɔsɛe mu no so.
6 Akyiri yi, Babilon hene bi a wɔakyerɛw ne ho asɛm sɛ ɔhoahoaa ne ho no suasuaa Satan aniammɔho no bi. Ɔhoahoaa ne ho sɛ: “Mɛforo akɔ soro. Mɛma m’agua so asi Onyankopɔn nsoromma atifi, na mɛtena nhyiam bepɔw so wɔ atifi fam nohoa. Mɛforo atra ɔsoro mununkum; mɛyɛ me ho sɛ Ɔsorosoroni no ankasa.” (Yes. 14:13-15) Ade a nyansa nnim a na saa ɔhene no pɛ sɛ ɔyɛ no anyɛ yiye, na Babilon ahemman no hwee ase animguase mu. Saa ara na Satan ne ne wiase no bedi nkogu pasaa nnansa yi ara.
Dɛn Nti na Yehowa Maa Kwan?
7, 8. Mfaso a abɔnefosɛm a Yehowa ama ho kwan kosi bere bi de aba no bi ne dɛn?
7 Ebia ebinom bebisa sɛ dɛn nti na Yehowa maa kwan ma nnipa kɔkaa Satan ho na ɔsan maa kwan ma wɔhyehyɛɛ nniso foforo a na ebedi nkogu ɔkwan biara so? Akyinnye biara nni ho sɛ na anka ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn no betumi asiw biribi a ɛte saa kwan. (Ex. 6:3) Nanso wanyɛ saa. Nyansa a ɔwɔ no ma ohui sɛ sɛ oyi ne nsa fi nnipa a wɔatew atua no ho bere tiaa bi a, biribi pa befi mu aba daakye. Awiei koraa no, obiara behu sɛ Yehowa na ɔyɛ Sodifo a ɔteɛ na ɔwɔ ɔdɔ, na nnipa anokwafo benya gyinae a Onyankopɔn sii no so mfaso.
8 Sɛ nnipa anni Satan nnaadaa akyi antwe wɔn ho amfi Onyankopɔn nniso ho a, anka adesamma ankɔ amanehunu a ɛte sɛɛ mu! Nanso, mfaso aba gyinae a Yehowa sii sɛ ɔbɛma kwan ma nnipa ankasa adi wɔn ho so no so. Ɛno ama nnipa komapafo ahu sɛ nyansa wom paa sɛ wobetie Onyankopɔn asɛm na wɔde wɔn ho ato no so. Wɔ mfehaha pii a atwam mu no, nnipa asɔ nniso ahorow nyinaa bi ahwɛ, nanso emu biako mpo nni hɔ a ayɛ yiye ama wɔn. Saa asɛm no ama ahotoso a Onyankopɔn asomfo wɔ sɛ Yehowa nniso na ɛyɛ papa paa no mu ayɛ den. Nokwarem no, Satan nniso bɔne a Yehowa ama ho kwan no de ahokyere aba adesamma so, na ebi aka Onyankopɔn asomfo anokwafo nso. Nanso, Onyankopɔn asomfo anokwafo anya abɔnefosɛm a wama ho kwan bere tiaa bi no so mfaso.
Atuatew a Ahyɛ Yehowa Anuonyam
9, 10. Kyerɛkyerɛ sɛnea Satan nniso ahyɛ Yehowa anuonyam no mu.
9 Ma a Yehowa ama Satan kwan ma wadaadaa nnipa ma wɔn ankasa redi wɔn ho so no mma ɛmmɛdaa adi sɛ Yehowa nniso nyɛ papa. Ahyɛ no anuonyam mmom! Abakɔsɛm ada no adi sɛ asɛm a Yehowa honhom kaa Yeremia ma ɔkae sɛ nnipa ntumi nni wɔn ho so no yɛ nokware. (Monkenkan Yeremia 10:23.) Afei nso, Satan atuatew no ama Yehowa anya hokwan de ada Ne su ahorow a ɛyɛ fɛ no adi ma obiara ahu. Ɔkwan bɛn so?
10 Esiane amanehunu a Satan nniso de aba nti, ama Yehowa su ahorow a ɛyɛ pɛ no ada adi kɛse sen sɛnea ebia anka ɛbɛyɛ no mpo. Wɔ saa kwan yi so no, ama nnipa a wɔdɔ Yehowa no ahu ne kɛseyɛ. Nokwarem no, ebia ɛbɛyɛ te sɛ nea ntease nnim de, nanso Satan nniso no ahyɛ Onyankopɔn anuonyam ankasa. Ama obiara ahu ɔkwampa a eye sen biara a Yehowa afa so adi ne tumidi a wɔsɔre tiae no ho dwuma. Nea ɛbɛyɛ na yɛakyerɛkyerɛ saa nokwasɛm no mu no, ma yensusuw Yehowa su ahorow no bi ho kakra na yɛnhwɛ sɛnea Satan nniso bɔne no ama Yehowa ada saa su ahorow yi adi wɔ akwan foforo so ho nhwɛ.
11. Ɔkwan bɛn so na Yehowa dɔ ada adi?
11 Ɔdɔ. Kyerɛwnsɛm no ka kyerɛ yɛn sɛ “Onyankopɔn ne dɔ.” (1 Yoh. 4:8) Nnipa a Onyankopɔn bɔɔ wɔn no nkutoo mpo ma ɛdaa adi sɛ ɔwɔ ɔdɔ. Afei nso, sɛnea wɔyɛɛ yɛn ma ɛyɛ hu na ɛyɛ nwonwa no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn yɛ ɔdɔ. Yehowa fi ɔdɔ mu nso maa nnipa ofie a ɛyɛ fɛ a na biribiara a ɛbɛma wɔn ani agye wom. (Gen. 1:29-31; 2:8, 9; Dw. 139:14-16) Nanso bere a adesamma yɛɛ bɔne no, Yehowa daa ne dɔ adi wɔ akwan foforo so. Ɔkwan bɛn so? Ɔsomafo Yohane bɔ amanneɛ sɛ Yesu kae sɛ: “Onyankopɔn dɔ wiase paa ma enti ɔde ne Ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ɔkyerɛ no mu gyidi no ansɛe na mmom wanya daa nkwa.” (Yoh. 3:16) So ɔkwan foforo bi wɔ hɔ a ɛsen biara a anka Onyankopɔn betumi afa so ada ne dɔ adi akyerɛ adesamma sen sɛ ɔsomaa ne Ba a ɔwoo no koro no baa asase so sɛ ommegye abɔnefo? (Yoh. 15:13) Ɔdɔ kɛse a ɔdaa no adi yi nso ayɛ nhwɛso ama nnipa, na ama wɔanya hokwan sɛ wɔn nso bɛda ɔdɔ kann a Onyankopɔn wɔ no bi adi wɔ biribiara a wɔyɛ wɔ wɔn asetena mu da biara da te sɛ nea Yesu yɛe no.—Yoh. 17:25, 26.
12. Ɔkwan bɛn so na tumi a Yehowa wɔ no da adi?
12 Tumi. “Nyankopɔn, ade nyinaa so Tumfoɔ” no nkutoo na ɔwɔ tumi a ɔde bɔ nkwa. (Adi. 11:17; Dw. 36:9) Sɛ wɔwo onipa a, sɛnea yɛbɛka no no, ɔte sɛ krataa a wɔnkyerɛw hwee wɔ so. Nanso, onipa bɛkɔ owu mu no, na ɔnam gyinae a wasisi, ne nneyɛe, ne osuahu a wanya wɔ asetena mu a ɛma ɔyɛɛ obi a ɔda nsow koraa no so akyerɛw krataa a na hwee nni so no so. Yehowa betumi de nsɛm a ɛte saa no asie n’adwenem. Bere a ɛsɛ mu no, Yehowa betumi ama saa onipa no aba nkwa mu bio a okura ne su ahorow a ɛma wohu no sɛ asomasi ni. (Yoh. 5:28, 29) Enti, ɛwom sɛ Onyankopɔn ammɔ owu anka nnipa ho mfiase de, nanso owu ama Yehowa anya ho kwan ada no adi sɛ ɔwɔ tumi a ɔde nyan awufo mpo. Yehowa ne “Nyankopɔn, ade nyinaa so Tumfoɔ” no ampa.
13. Ɔkwan bɛn so na Yesu afɔrebɔ no yɛ atɛntrenee a ɛyɛ pɛ a Yehowa daa no adi?
13 Atɛntrenee. Yehowa nni atoro; saa ara nso na ɔnyɛ nea ɛnteɛ. (Deut. 32:4; Tito 1:2) Yehowa di nokware na obu atɛntrenee bere nyinaa, bere mpo a ɛte sɛ nea saa a ɔyɛ no bɛma wahwere biribi no. (Rom. 8:32) Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ Yehowa dii yaw bere a ohui sɛ wɔrekum ne Dɔba Yesu wɔ asɛndua so te sɛ nea ɔyɛ mmusubɔfo bi no! Nanso, esiane ɔdɔ a Yehowa wɔ ma nnipa a yɛnyɛ pɛ nti, ɔpenee so maa asɛm a ɛyɛ yaw yi kɔɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a obedi n’ankasa atɛntrenee ho gyinapɛn a ɛyɛ pɛ no so. (Monkenkan Romafo 5:18-21.) Ntɛnkyea a ahyɛ wiase ma no ama Yehowa anya hokwan ada no adi sɛ ɔno ne obi a obu atɛntrenee sen obiara.
14, 15. Nneɛma a ama Yehowa nyansa ne ne ntoboase a ɛsen biara ada adi no bi ne dɛn?
14 Nyansa. Bere a Adam ne Hawa yɛɛ bɔne pɛ na Yehowa kyerɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ayi ɔhaw a wɔn atuatew no de aba nyinaa afi hɔ. (Gen. 3:15) Sɛnea Yehowa yɛɛ ade ntɛm so ne n’atirimpɔw a ɔdaa no adi nkakrankakra kyerɛɛ n’asomfo no maa ne nyansa daa adi yiye. (Rom. 11:33) Biribiara rentumi nsiw Onyankopɔn kwan a ɛremma ontumi nyɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara. Wɔ wiase a nnipa a wɔwom bra asɛe, wodi ako, wonni ntease, wɔyɛ asoɔden, wodi atirimɔdensɛm, wɔyɛ animhwɛ, na wɔyɛ nyaatwom no ama Yehowa anya hokwan kɛse akyerɛ n’abɔde ade a ɛne nyansa ankasa. Osuani Yakobo kae sɛ: “Nyansa a efi soro no de, nea edi kan no, ɛho tew, ɛpɛ asomdwoe, ɛwɔ ntease, ɛyɛ asoɔmmerɛw, mmɔborɔhunu ne aba pa ayɛ no mã, ɛnhwɛ nnipa anim nyɛ nyiyim, ɛnyɛ nyaatwom.”—Yak. 3:17.
15 Ntoboase ne Abodwokyɛre. Sɛ ɛnyɛ sɛ ɛkɔbae sɛ Yehowa ne nnipa a wɔnyɛ pɛ, wɔyɛ abɔnefo, na wɔtɔ sin di a, anka Yehowa su a ɛne ntoboase ne abodwokyɛre no renna adi kɛse saa mma yenhu. Ntoboase ne abodwokyɛre a Yehowa ada no adi mfe mpempem pii no ama yɛahu sɛ ɔwɔ saa su ahorow a ɛyɛ fɛ yi kɛse ma enti ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ ho anisɔ paa. Ɛfata sɛ ɔsomafo Petro kae sɛ ɛsɛ sɛ ‘yebu yɛn Awurade ntoboase no sɛ nkwagye.’—2 Pet. 3:9, 15.
16. Dɛn nti na ɔpɛ a Yehowa wɔ sɛ ɔde bɔne befiri no ma yɛn ani gye kɛse?
16 Ɔpɛ a Ɔwɔ sɛ Ɔde Bɔne Befiri. Yɛn nyinaa yɛ abɔnefo, na yɛn nyinaa di mfomso mpɛn pii. (Yak. 3:2; 1 Yoh. 1:8, 9) Hwɛ sɛnea ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani sɔ sɛ Yehowa wɔ ɔpɛ sɛ ɔde bɔne befiri ma “aboro so”! (Yes. 55:7) Susuw nokwasɛm yi nso ho hwɛ: Esiane sɛ wɔwoo yɛn sɛ abɔnefo a yɛtɔ sin nti, sɛ Onyankopɔn de yɛn mfomso firi yɛn a, yɛn ani tumi gye yiye. (Dw. 51:5, 9, 17) Sɛ Yehowa da saa su a ɛka koma no adi kyerɛ yɛn ankasa a, ɛma ɔdɔ a yɛwɔ ma no no mu yɛ den, na ɛhyɛ yɛn nkuran ma yesuasua no wɔ sɛnea yɛne afoforo di mu.—Monkenkan Kolosefo 3:13.
Nea Enti a Wiase no Yare
17, 18. Akwan bɛn so na Satan nniso adi nkogu?
17 Wɔ mfehaha pii a atwam mu no, Satan wiase no nhyehyɛe nyinaa—nea ne nniso no de aba—akɔ so adi nnipa huammɔ bere nyinaa. Wɔ afe 1991 mu no, atesɛm krataa a wɔfrɛ no The European kae sɛ: “So wiase no yare? Yiw, ɛyare ankasa . . . nanso ɛnyɛ Onyankopɔn na wama ɛyare—wiase no mu nnipa na wɔama ɛyare.” Hwɛ sɛnea saa asɛm yi yɛ nokware! Satan daadaa yɛn awofo a wodi kan no ma wɔpoo Yehowa nniso kɔfaa nnipa nniso mmom. Wɔnam saa a wɔyɛe so hyehyɛɛ nniso a na ebedi nkogu ɔkwan biara so. Ɛyaw ne awerɛhow a nnipa a wɔwɔ wiase nyinaa di no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ yare a ɛyɛ hu abɔ nnipa nniso.
18 Satan nniso hyɛ pɛsɛmenkominya ho nkuran. Nanso, pɛsɛmenkominya rentumi nni ɔdɔ so da, na ɔdɔ na Yehowa de di tumi. Satan nniso ntumi mmaa nnipa nnyaa ahotɔ, anigye, ne ahobammɔ. Ada adi sɛ Yehowa nniso na ɛfata! So yɛwɔ adanse wɔ hɔ nnɛ a ɛkyerɛ saa? Yiw, yɛwɔ bi, na yebehu wɔ adesua asɛm a edi hɔ no mu.
Dɛn na Yesua Faa Nniso Ho Bere a Yɛkenkan . . .
• Romafo 13:1, 2?
• Mmebusɛm 21:30?
• Yeremia 10:23?
• Kolosefo 3:13?
Adesamma nnyaa Satan nniso so mfaso da
Yehowa wɔ tumi a ɔde nyan awufo mpo
Yehowa Ba a ɔde no bɔɔ afɔre no maa ne dɔ ne n’atɛntrenee daa adi
Share Share Satan Nniso Bedi Nkogu Ɔkwan Biara So
w10 1/15 kr. 24-28
Dɛn Nti Na Ɛsɛ Sɛ Wuhyira Wo Ho So Ma Yehowa?
Ɛyɛ Adom Sɛ Yɛyɛ Yehowa Dea
Da Wo Ho Adi Sɛ Woyɛ Kristo Kyidifo Ankasa
Boa Wo Mma Ma Wonnyina Ɔhaw Pii a Wohyia Ano
Hyɛ Onyankopɔn Anuonyam Wɔ W’asetena Mu Da Biara Da
Ada Adi Sɛ Yehowa Nniso Na Ɛfata!
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 2010
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 2010
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 2010